ထန်တလန်တွင် ၎င်းတို့စခန်းအနီးရှိ နေအိမ်များကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဆက်လက်မီးရှို့ - Myanmar Pressphoto Agency
ထန်တလန်တွင် ၎င်းတို့စခန်းအနီးရှိ နေအိမ်များကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဆက်လက်မီးရှို့
MPA November 28, 20212min read
လူသူကင်းမဲ့နေပြီဖြစ်သည့် ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့မှ လူနေအိမ်များကို နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ကလည်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။
Photo – The Chin Journal
ထန်တလန်မြို့ရှိ နေအိမ်များကို တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲ အကြောင်းမဲ့ ဆက်လက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ တပ်စခန်းချရာ အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ နေအိမ်များကို မီးရှို့နေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ချင်း‌ပြည်နယ်မှ ဒေသခံ ကာကွယ်ရေးတပ်များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကို အနီးကပ်ဝင်ရောက်ပြီး တိုက်ခိုက်ရာတွင် အကာအကွယ်မယူနိုင်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့ စခန်းအနီးတဝိုက်ရှိ နေအိမ်၊ အဆောက်အဦများကို ကြိုတင်ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြာင်း ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး(CNF)မှ တာဝန်ရှိသူကဆိုသည်။
“ကျနော်တို့အမြင်ကတော့ ကျနော်တို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေက အိမ်တွေကို အကာအကွယ်ယူပြီးတော့ သူတို့ကို တိုက်လို့မရအောင် ကြိုတင်ပြီးတော့ ဖျက်ဆီးထားတာလို့ ယူဆပါတယ်” ဟုချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူက ဆလိုင်းထက်နီက MPAသို့ ပြောသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်သည့်နေရာသည် အကြမ်းဖက်စစ်တပ် စခန်းချရာ ထန်တလန် ရဲစခန်းအနီးတွင် တည်ရှိခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွင် ထန်တလန်မြို့၊ စိုက်ပျိုးရေးရပ်ကွက်ရှိ စိန့်နီကောလပ်စ် ကက်သလစ် ဘုရားကျောင်း မီးထဲပါသွားခဲ့သည့်အပြင် လုံတီရယ်ရပ်ကွက်မှ နေအိမ်များနှင့် အနီးတဝိုက်မှ နေအိမ်များကိုလည်း မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် နေအိမ်အရေအတွက်ကိုမူ လက်ရှိအချိန်ထိ အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ထန်တလန်မြို့ကို ၉ ကြိမ်မြောက် မီးတင်ရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ထန်တလန်မြို့ခံများမှ ဒေသငြိမ်းချမ်းလျင်ပင် ပြန်စရာ အိမ်မရှိတော့သည့် အခြေအနေသို့ ဆိုက်ရောက်သွားကြောင်း ထန်တလန်စစ်ရှောင်များကိုကူညီပေးနေသူတစ်ဦးကပြောသည်။
“စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေဟာ ချင်းတွေကို နာလန်မထူနိုင်အောင် အကြမ်းဖက်မှု၊ လူသားမဆန်မှုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထန်တလန်မြို့သည် ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်များအခြေစိုက်ရာနှင့် ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး၏ ဌာနချုပ် တည်ရှိရာနေရာများနှင့် အနီးတွင်တည်ရှိနေသောမြို့ ဖြစ်သည်။
ဆလိုင်းထက်နီက “ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးနဲ့ ချင်းကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့လည်း နီးတယ် အဲဒီတော့ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ကုန်းကြောင်းကနေ စစ်ကူကလည်း မရတော့ဘူး။ ပြည်သူလူထုလည်း မရှိတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ကလည်း အပြင်ကနေဝိုင်းထားတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့” ဟု ပြောသည်။
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်မီးရှို့ခဲ့သော ထန်တလန်မြို့တွင် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ၄ခုနှင့်လူနေအိမ် ၂၆၀ထက်မနည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထန်တလန်ရှိ ပြည်သူအများစုမှာ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် ဒေသခံကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂၇ရက်နေ့ကတည်းကဘေးလွတ်ရာများသို့ တိမ်းရှောင်နေကြရလျက်ရှိသည်။
အများစုမှာ ထန်တလန် အနီးတဝိုက်ရှိ ကျေးရွာများနှင့် အခြားဆွေမျိုး မိသားစု ရှိရာနေရာများ၊ အချို့ဆိုလျင် အိန္ဒိယပြည်နယ်မီဇိုးယမ်းပြည်နယ်အထိ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရလျက် ရှိနေသည်။
#CNF #ထန်တလန် #ချင်းပြည်နယ် #နေအိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီး #MPA
Severely Beaten Strike Leader Facing More Cases plus to being Given Life Sentence
Ko Ye Htet Aung, leader of Young Myanmar Ranger (YMR), who was given life sentence by the terrorist military on November 23, yet is still going to face trials atamilitary tribunal andatownship court.
He was given life sentence byamilitary tribunal in South Dagon township on section 50(i) and he still has to face cases at Eastern Dagon and Dagon Seikkan townships, his lawyer said.
“This sentencing is by the South Dagon township. By the military tribunal. There are still in Dagon Seikkan and Eastern Dagon townships. It’s sued on 19(f) in Eastern Dagon. But we don’t know what they would sue him on by Dagon Seikkan as it’s the military tribunal”, his lawyer said.
Ko Ye Htet Aung, leader of YMR which is one of the urban guerilla strikes in Yangon, was arrested in September and was kept at the interrogation camp for so long and he was so tortured his one ear has gone deaf.
“At the interrogation, there were torture wounds. His one ear had gone completely deaf. And there were lots of knife wounds on his thigh and he had been struck and beaten severely’, said one close to him.
Withinaweek of his arrest, there were arrests of those close to him as well.
Due to the torture wounds at the interrogation camp, Ko Ye Htet Aung also got trauma and attempted to commit suicide more than once.
“At the interrogation, his mind and body were completely apart and he attempted to take his life. He went insane about two or three times. Finally, as he couldn’t bear any more torture, he attempted suicide about two or three times”, saidafriend of his.
Since Ko Ye Htet Aung who is an orphan is currently cut contact by his guardians, his friends and those close to him are taking care of delivering food. But due to issues like the census (guest list), it’s extremely difficult to give himafood visit.
#MPA #LifeSentence #YMR #Yangon #Myanmar
Tags: ChinState HtanTlang militarycoup MPA News
Previous: ဖမ်းဆီးခံရာမှ လွတ်မြောက်ပြီး လပိုင်းအတွင်း မုံရွာဦးအောင်ရှင် ကွယ်လွန်
Next: ကရင်နီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ အမြောက်တပ်မိသားစုမှ ငွေကျပ် ၂ သိန်းလှူ